Abanye bakholelwa ukuba intengo ephakamileyo kunye nemvelaphi engaqhelekanga iqinisekisa ukusetyenziswa kweziveliso. Enyanisweni, imifuno eqhelekileyo kunye nemifuno akuyona into embi kunabanye amazwe, nangona ukuba akudingeki ukuba uchithe imali eninzi ukuyithenga. Kule nqaku siza kuthetha ngeempawu ezixhamlayo zesipinashi kunye ne-asparagus. Umxholo wendaba yethu yanamhlanje ngu "isipinashi, i-asparagus - izakhiwo ezixhamlayo."
Isipinashi, i-asparagus isetyenziswa ngokubanzi phantse yonke ikhi ehlabathini. Ngethuba lokuqala ekudleni, isipinashi yaqalisa ukugqitywa kwikhulu le-6 ePersia, kwaye ukususela ngoko ke ukuphakama kwayo kuye kwanda kuphela. Kutheni oku kwenzekayo? Impendulo ilula: le mveliso ilula ukukhula, ngaphandle kokuba ihlanganiswe ngokugqibeleleyo kunye neentyatyambo ezininzi. Kodwa kubaluleke kakhulu kukuba iqukethe inani elikhulu lamavithamini kunye neemaminerali - ingakumbi iithamini ze-B, i-carotene, i-ascorbic acid kunye neeriti ezahlukahlukeneyo.
Okokuqala, isipinashi sinceda kulabo abahluphekileyo ngenxa yezifo ze-pancreatic, njengoko zivuselela umsebenzi wazo. Impembelelo enenzuzo yalo mveliso kwimisebenzi yamathumbu.
Elinye impahla ephawulekayo yipinashik kukwazi ukukhusela ukuvela kwezicubu ezimbi ngenxa yento ephezulu yeprotheni. Ngoko ke, kuya kuba luncedo ngakumbi kulabo abasandul 'ugulo lwe-radiation.
Isipinashi sinceda kuwo wonke umntu, kubandakanywa nabantwana - akubanga kubangelwa nantoni. Abantu abaphethwe zizifo ezinjengokuphelelwa amandla, i-anemia, i-enterocolitis, i-gastritis, i-anemia, kunye nezifo ezahlukahlukeneyo zesistim sezenzo azikwazi ukwenza ngaphandle kwalo mveliso. Iyakwandisa umkhuhlane, unobunzima obuthathaka obunobunzima, obuthathaka, obunokutshatyalaliswa, okungaxhomekeka njenge-prophylaxis yezi zifo.
Isipinachi idibaniswe ngokufanelekileyo kunye neentlobo zemveliso eyahlukeneyo, ngoko kuya kuba yinto ebalulekileyo ekulungiseleleni iintlobo ezininzi zeesobho, i-saladi nezinye izitya.
Enye imifuno enokubaluleka enokufumaneka rhoqo etafileni i-asparagus. Ngoku sele iyinto eqhelekileyo ukuyibona kumashalofu evenkile, kwaye ngokwenene xa inkosi yaseFransi uLouis XV inqabile ukuthengiswa kwayo ngentengiso ukwenzela ukuthintela isidlo "senkundla" ukuba singabi phantsi kwiitafile zabampofu. Ukususela ngoko, ixesha elide lidlulile, kodwa ngoku i-attitude of asparagus ikhethekileyo - kukholelwa ukuba iziqu zalo akufanele zibekho kwaye zingekho ngaphantsi kwama-22 cm. Kufuneka kuqatshelwe apha ukuba umxholo weivithamini kunye nezinye izinto ezincedo azixhomekeke ekubeni "ukukhula" kwazo. I-asparagus inene kakhulu.
I-Asparagus ibizwa ngokufanelekileyo ngokuthi "imifuno yobuhle" - iqulethe ngaphezu kwayo yonke indawo, folic acid. Le nkunkuma yenza i-skin epholile, ipholile kwaye ikhuseleke, ikhusela ukubonakala kwemibimbi, iphelisa i-edema kwaye ilwa neenwele zakuqala. Ijusi ye-Asparagus ikwazi ukulwa ngokuphumelelayo ne-warts, iifowusi kunye ne-cellulite. Kodwa i-asparagus ayinakunceda kuphela abo bajonga ngentshiseko indlela ababonakala ngayo-into equlethwe kuyo yintsebenziswano ebonakalayo entliziyweni nasemithanjeni yegazi, ukunciphisa uxinzelelo lwegazi.
Amahlumela amancinci, avela ekuqaleni kwentwasahlobo, asetyenziswa ngokubanzi ekulungiseleleni iisobho kunye nee saladi ezahlukeneyo. I-Asparagus inefuthe elizuzisa kungekhona kwesikhumba kuphela, kodwa ayivumeli ukuba umlambo uhlale emzimbeni-ngoko ke, ukuba yonke imihla idle amagremu ama-asparagus, unako ukuhlula iikhilogram ezintathu kwiiveki ezintathu. Kodwa ke iqukethe iivithamini ezininzi, ezikunceda ukuqinisa umkhuhlane kunye nokutshisa amafutha.
I-Asparagus ayinaso isithintelo ekusebenziseni - iya kuba luncedo kuwo wonke umntu. Ngexesha elifanayo, isipinashi, nangona iindawo ezininzi ezincedo, kufuneka zisetyenziswe ngokubaluleka kubantu abaphethwe yi-cholelithiasis, isifo se-urinary-renal kunye ne-gout. Ukuba awunayo na yezi zifo - ungadla isipinashi ngaphandle kwemimiselo.
Xa ulungiselela isipinashi kunye ne-asparagus, kufuneka ukhunjulwe ukuba kufuneka uzilungiselele ngeendlela ezithile zokukhulisa izakhiwo eziwusizo. Umzekelo, kucetyiswa ukuba usebenzise i-asparagus entsha xa ulungiselela i-salads kunye nokutya, kodwa ukuba kuyimfuneko ukuyitshisa - kufuneka uhlale ukhumbule ukuba unokwenza upheke uphinde uphese i-asparagus ngokungapheli kwemizuzu engama-20. Akukhuthazwa ukuba uphinde usebenzise izitya kwi-asparagus, kunye nokudibanisa newayini elibomvu. Isipinashi, i-asparagus ilungele ukutya okuluhlaza okanye iphekwe ukugcina ezininzi iimpahla zazo ezinokunceda njengoko kunokwenzeka.
Njengoko ubona, akukho mfuneko yokuhlawula imali eninzi kwimveliso ephuma ngaphandle, kufuneka nje ufunde oko sikutya phantse. Isipinashi kunye ne-asparagus iya kuba ngabazalwana bakho abathembekileyo kumzabalazo wempilo kunye nenhlalakahle, ngaphandle koko, akuyi kufuneka ukuba uphendule kwii-shelves zokugcina ixesha elide, kwaye awuyi kuyidinga iindleko ezingadingekile - ezi mveliso zide zizinzile ngokutsha kwiilafile zethu. Khumbula isipinashi, i-asparagus, iipropati ezixhamlayo zale mveliso, eqinisweni, ngumthombo wobomi, amandla kunye nokugqwesa.
Ziziphi ukutya eziqukethe iivithamini?
Ubusi biscotti nge lavender
Izimonyo zokuziphatha - ubuhle ngaphandle kobugwenxa
Iinqwelo ze-turkey kunye ne-sauce emnandi neyomuncu